२०० करोड खर्च गरेर विवाह दाजुभाइको विवाह, २ सय हेलिकप्टर र सय जना पण्डित बुक, ४०० प्रकारको खाना पकाइने ! – Sanchar Patrika
२०० करोड खर्च गरेर विवाह दाजुभाइको विवाह, २ सय हेलिकप्टर र सय जना पण्डित बुक, ४०० प्रकारको खाना पकाइने !
July 3, 2020 226
एजेन्सी । भारतको उत्तराखण्डमा एक विवाह समारोहका लागि छुट्टयाइएको बजेट सुन्दा जो कसैको पनि होस् हवास नै उड्छ । यो विवाह भारत सहारनपुरको एनआरआइ गुप्ता परिवारका सदस्यको हो । अजय र अतुल गुप्ताका छोरा सूर्यकान्त र शशांकको विवाह क्रमश २० र २२ जुनमा तय भएको छ । विवाहको कार्यक्रम औलीमा १८ देखि २२ जुनको बीचमा हुनेछ ।
जसका लागि २ सय हेलिकोप्टर र १०० जना पण्डित बुक गरिएको छ । विवाहको लागि बनाइएको निमन्त्रणा कार्डपनि अनौठो खालको छ । यसमा विवाहको जानकारी भएको छ पाना छ । जुन चाँदीले बनेको छ । जसको तौल ४.५ किलोको रहेको छ ।
विवाहपछि पाहुनाहरुलाई बद्रीनाथ लैजाने कार्यक्रम तय भएको छ । यसका साथै पाहुनाका लागि लगभग ४०० प्रकारको अलग अलग खानाको व्यवस्था गरिएको छ
काठमाडौं : लोडसेडिङको अन्त्य गरी नेपाललाई अन्धकारमुक्त बनाउदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बचाएका कुलमान घिसिङकै कारण नेपाली जनताले अर्को ठूलो राहत पाउने भएका छन् । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अब विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सरकारी तयारीले कुलमानको योगदान पुनः स्मरणीय गराएको छ ।
बर्षेनी करोडौं घाटामा रहेर सरकारको सेता हात्तीको उपमा पाएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नाटकीय सुधार गरेर नाफामा लगेपछि उपभोक्तामैत्री महसुल निर्धारण गर्न लागिएको हो । महसुल महंगो भएका कारण निम्नस्तरका जनताले बिद्युत उपभोग गर्न नसकेको र उद्योगधन्दालाई पनि मर्का परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर अब महसुल दर निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
महसुल निर्धारण गर्न गठित विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ ले बिद्युत उत्पादकहरुलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी बनाउने प्राबधान राखेको छ । यो प्राबधानबाट प्राधिकरणसहित सरकारबाट विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाको आर्थिक विवरण हेरेर मात्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुने भएको छ ।
Prevइन्स्टाग्राममा गरेको एक पोष्टबाट कोहली र प्रियंकाले कति कमाउँछन् ?
Nextयुएईमा समस्यामा परेका नेपालीलाई अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाज युएईको राहत सहयोग
भगवान शिवको पूजा गर्दा जप्नुस् यी मन्त्र हुनेछ लाभै लाभ ! पूजा विधि